Dulmarka Xarunta / Qalabka | Ota Ward Hall Aplico
Si loo xaqiijiyo badbaadada dhammaan isticmaaleyaasha, waxaan qaban doonnaa shaqo si aan uga dhigno saqafyada hoolka / hoolka weyn, hoolka yar iyo hoolka weyn ee hoolka, iyo saqafka qolka bandhigga u adkaysiga dhulgariirka, iyo dayactirka shaqada si loo ballaariyo nolosha xarunta.
[Muddada xiritaanka ee jadwalka leh: Janaayo 2022 illaa Febraayo 1 (qorsheysan)]
Faahfaahintu waaHalkanFadlan hubi inbadan.
Hoolka yar waa meel gebi ahaanba fidsan oo leh jaranjaro kor u qaadaysa ilaa 50 cm dherer ah.
Markaad isticmaaleyso masraxa, waxaa jira 175 kursi oo keliya kuraasta iyo 108 kursi oo loogu talagalay qaabka dugsiga, kuwaas oo loo isticmaali karo riwaayado, bandhigyo kala duwan, muxaadarooyin, iwm.
Gobol ay masraxa kor u qaaddo 50 cm
Iyadoo kursiga lagu rakibay
Kuraasta dhagaystayaasha ayaan la hagaajin.Sidoo kale waa suurtogal in la diyaariyo kuraasta (illaa 175 kursi) ama la isticmaalo miis dheer.
Qaab dhismeedka xarunta awgeed, durbaanka Japan looma isticmaali karo.
Ma ciyaari kartid ama ma ciyaari kartid masraxa mooyee.
Ma cuni kartid ama ma cabi kartid markaad isticmaaleyso marxaladda kor u qaadista.
Maaddaama aysan jirin xarun guddi bandhigeed, suurtagal maaha in lagu muujiyo darbiga.
Haddii aad rabto inaad si wada jir ah u isticmaasho qolka bandhigga iyo hoolka yar, waxaad u baahan tahay inaad kireysato isla qaybtaas isla maalintaas.Intaas waxaa sii dheer, ma ciyaari kartid qalabka muusikada ama karaoke maxaa yeelay qalabka codku wuu lumay.
Kuraasta kaliya: Ilaa 175 kursi
Markaad isticmaaleyso miis iyo kursi: 108 kursi (marka aadan sare u qaadin heerka kor u qaadista: 120 kursi)
Liiska qalabka nalka
Liiska qalabka maqalka
Bedka: 170 mitir murabac
Qoto dheer: 17m, Dhererka saqafka: 4.5m
Heerka kor u qaadista (ballaca 9.9m x qoto dheer 4.7m x dhererkeedu 0-50cm)
Budhadh khafiif ah 6, fanka fanka 1, daah 3
Shaashadda (nooca fuuli kara) cabirka ugu badan: 3.15m x 5.85m
(Panasonic Paretas Gamma) Fader hore
60ch 3 tallaabo 1,000 xusuusta goobta
20 submasters x 6 bog
10 submaster faders (qolka hore)
Wareegga wareejinta Marxaladda (3kW x 78 wareegood)
Qalabka nalalka ayaa la dhigay Iftiinka ka joojinta 1 saf
Laydhka xadka (LED) 1 saf
3 saf oo nalalka saqafka ah
Iftiinka horizont (sare, hoose, LED)
1 2kw dhibco xinon pin (hawlwadeenka loo baahan yahay isticmaalka)
Miiska hagaajinta codka
(RAMSA C-900) Gelitaan: Monaural 20ch + Stereo 4ch
Soo-saar: 4 kooxood 4AUX
Ustaad LR Matrix x 16
Afhayeenka Afayeenka guud: NEXO PS15V (duulaya)
Qalabka soo dhaweynta
Miiska soo dhaweynta
Loox Saxiix ah (Dusha lifaaqa: dhererkiisa 84 cm x 30 cm)
Fadlan horay u sii sii qabsashada sidii hore loola wadaagi lahaa maadaama lala wadaago qolka bandhiga.
Qaboojiyaha, mashiinka barafka, iwm.
Dab ma jiro
Macluumaadka meesha laga soo galo (yaardka adeegga)
* Maadaama lala wadaago tas-hiilaadka kale, lama xiri karo ka dib marka la qaado ama la geeyo.
* Markaad keydinaysid, fadlan ka soo gal albaabka gawaarida la dhigto ee dhinaca xafiiska boostada dhinaceeda ka dambeeya Aprico.
Xadka dhirirka: 2.8m
Kharashka isticmaalka xarunta iyo khidmadda isticmaalka qalabka shilalka ah
Maalmaha shaqada / Sabtida, Axadda, iyo ciidaha
Hoolka Yar: Kulan Muxaadaro ah
Hoolka yar: Iibka alaabta
Hoolka yar: Bandhig
Maalin kasta oo keliya ayaa la isticmaalaa 14,000 / 14,000
Qolka sugitaanka 1
Qolka sugitaanka 2
Isticmaalayaasha isbitaalka ka baxsan
Maalin kasta oo keliya ayaa la isticmaalaa 16,800 / 16,800
Khidmadda isticmaalka qalabka gawaarida
Liiska khidmadaha isticmaalka qalabka / qalabka
Guud ahaan sawirka iyo qaabka isticmaalka (tusaale)
Guud ahaan muuqaalka hoolka yar
Ku saabsan qolka sugitaanka
Hoolka yar waxaa ku yaal XNUMX qol oo wax lagu sugo oo leh XNUMX qof.
Faahfaahin dheeraad ahMacluumaadka qolka sugitaanka hoolka yar Fadlan fiiri
Jadwalka marxaladda, qolka sugitaanka, iwm.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad aragto sida ay u egtahay, fadlan dhagsii sawirka.
Guji astaanta si aad ugu aragto muuqaalka dusha sare.